France lilizwe elihle kunye kwiindawo ezininzi kunokwenzeka ukuba ijelo okanye wayehamba iholide. A ezimbalwa kwimimandla yaseFransi kuma ngaloo mba: i Midi, Ummandla weAquitaine, kunye Camargue. Ngamnye kubo uneempawu ezizodwa.
Owokuqala Canal du Midi, a World Heritage Site kwaye umzila endala ngumntu eYurophu elisekho ilandela indlela yayo yoqobo. Lo msebenzi kaPierre Paul Riquet wagqitywa ngo 1681. Apha endleleni, ingami phantsi i Midi, ungabona Le Somail and Carcassonne, neendawo ezimbini ephakathi umtsalane. Ukuba umthanda Ukutya okuhle yaye iwayini enkulu, unga zama Minervois odumileyo Midi kunye Corbieres, kunye cassoulet, a uju lendawo.
Yintoni ikakhulu ebukekayo kukuba endleleni ungabona izigodlo emangalisa, iinqaba ephakathi, kunye needolophu ubudala elidala. Kwaye abo bayithandayo indalo ngokungathandabuzekiyo baya kuyonwabela intlango engonakaliswanga kwaye ubutyebi bezilwanyana zasendle.
Ngoko kukho Ypres, indawo eyothusayo ezele ezibalulekileyo ezimbalini kunye izinto ezikhethekileyo Flemish, izandi, nencasa. Ukuhamba indlela yakho emnandi Belgian iitshokolethi ngesandla, okanye ukhombise ngamandla Beers Belgian. Ilizwe liyakwamkela ngovuyo olusulungekileyo kuzo zonke izivamvo.
Akukho luhlu lwe kakhulu kwiindawo European kuba ngokupheleleyo ngaphandle Netherlands. Oko kuquka zokufikela afundisa iiholide best itshaneli kunye wayehamba eYurophu. Kwilizwe imijelo yamanzi kwafuneka ukufumana indawo yayo kuluhlu, ngenxa izimvo zalo mihle, imizila ebukekayo, kwaye lula nokuthula losuka.
#umjelo #Iphenyane lomlambo #uhambo europetrains eurotrip trainjourney